Waikiki akapfeka korona 2021 Yakawanda Mhuri-Inoshamwaridzika US Kuenda
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Kuputsa US News » Waikiki akapfeka korona 2021 Yakawanda Mhuri-Inoshamwaridzika US Kuenda
Kuputsa Kufamba Nhau • Kuputsa US News • Hawaii Kupwanya Nhau • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Nhau Dzakanaka • nhau • Resorts • Kutarisirwa • Vanodanana Michato Honeymoons • ushanyi • Tourism Kutaura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
Waikiki akarova chinhanho kubva kunzvimbo dzese, kune ese muzana ezviitiko zvehukama zvine vana ne83.% uye muzana yezvivakwa zvevana zvine hushamwari pa84.2%.
Tsvagiridzo iyi yakatarisa zvinhu zvakasiyana siyana zvinosanganisira wepakati pekugara mutengo husiku, huwandu hwevanofarira vana, tembiricha yegore, kunaya kwemvura uye huwandu hwematsotsi
Kutora nzvimbo yechipiri ndiWailea - imwe nzvimbo yekuHawaii ine huwandu hwakawanda hwe8.27 kubva pa10.
Sanibel Florida inotora nzvimbo yechitatu nezvibodzwa zvinosvika 7.4 pagumi.
Waikiki, Hawaii yakanzi ndiyo inoshamwaridza mhuri kuenda kuUS muna 2021 muFamily Friendly Travel Index iyo inoronga nzvimbo dzakanakisa muUS kuzororo rako rinotevera-rakanaka.
Tsvagiridzo iyi yakatarisa zvinhu zvakasiyana siyana zvinosanganisira wepakati pekugara mutengo husiku, huwandu hwezvinhu zvinokwezva zvevana, tembiricha yegore, kunaya kwemvura uye huwandu hwematsotsi.
Iyo yepamusoro gumi yemhuri inoshamwaridzika nzvimbo dzekuUS
chinzvimbo Enda Nyika / Ndima Yakazara mamaki eUshamwari hweMhuri
6 Hilton Head Island South Carolina 6.98
Waikiki mukati Hawaii inotora korona yenzvimbo yakanakisa yemhuri inoshamwaridzika muUS Uine mamakisi masere kubva pa8.38. %.
Kutora nzvimbo yechipiri ndiWailea - imwe nzvimbo yekuHawaii ine huwandu hwakawanda hwe8.27 kubva gumi. Iine 10% yemahotera akanyorwa ane hushamwari evana uye neavhareji tembiricha ye80.4.
Sanibel Florida inotora nzvimbo yechitatu ine huwandu hwese hwe7.4 kubva pagumi, iine tembiricha yepamusoro ye10 uye 74.6% yeresitorendi ine hushamwari hwevana.
Tsvagiridzo iyi yakatarisawo muhukama hwemhuri hwemapaki emunyika muUS, anotarisa huwandu hwamaeka pamushanyi, huwandu hwezvinhu zvinokwezva zvakanyorwa se'zvakanaka kuvana ', muzana yezvinokwezva zvakanyorwa se'zvisikwa nemapaki' , avhareji tembiricha uye kunaya kwemvura.
Iwo epamusoro gumi akanakisa emhuri ane hushamwari mapaki emunyika eUS
chinzvimbo National Park Nyika / Ndima Yakazara Chikamu cheMhuri Hushamwari
2 mutsvuku California 6.39
6 Guadalupe Makomo Texas 6.14
7 Nzvimbo dzose Florida 6.14
8 Carlsbad Makomba New Mexico 6.12
9 Nhema Canyon yeGunnison Colorado 6.09
9 Gungwa Clark Alaska 6.09
IVirgin Islands ndiyo paki yepamusoro yenyika yezororo remhuri muUS, ine huwandu hwakawanda hwe6.58 kubva pa10. Neyechipiri tembiricha yepamusoro ye79.2 uye ne55% yezvinokwezva zvakanyorwa seyakanaka kuvana.
Redwood muCalifornia inouya yechipiri, iine mamakisi 6.30 kubva pagumi, iine yakawanda muzana yezvinhu zvinokwezva zvevana pa10% pamwe ne80% yezvinokwezva zvakanyorwa senge mapaki nemapaki.
Kutora nzvimbo yechitatu ndeyeBig Bend Texas ine mamakisi e6.26 kubva pagumi, iine 10% yezvinokwezva zvakanyorwa semasikirwo nemapaki uye tembiricha yegore rimwe ne67.